Madaxweyne Siilaanyo waxa uu Dawlada Imaaratka Carabta uga mahad naqay Mucaawinada Abaaraha. |
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu Dawlada Imaaratka Carabta uga mahad naqay Mucaawinada Abaaraha.
Hargeysa(GNN):-Madaxweynaha somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa dhambaal mahad celin ah u diray dawlada isku taga imaaraadka carabta.
Warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somaliland ayaa lagu sheegay inuu madaxweynuhu dawlada imaaraadka iyo boqorka dalkaasi uga mahad celiyey kaalinta ay ka galeen gargaarka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen, waxaanu warsaxaafadeedkaasi u dhignaa sidan “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Dhambaal hambalyo ah u diray boqorka isu-taga Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo, waxa uu dhambaal mahadnaq ah u diray boqorka isu-taga Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Xukuumada isu-taga imaaraadka carabta iyo shacbiga dalkaasiba